၉ သင်ရှောင်သင့်သည့်ကမ်းတက်စာမျက်နှာမှားယွင်းမှုများ | Martech Zone
9 Landing Page သင်ရှောင်ရှားသင့်သည့်အမှားများ
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 16, 2015 အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 30, 2015 Douglas Karr
တစ်ယောက်ယောက်ကိုသူတို့ရောက်တဲ့စာမျက်နှာပေါ်မှာအာရုံရောက်အောင်ဘယ်လောက်များများလုပ်ထားတာကိုသင်အံ့သြမိမှာပါ။ ခလုတ်များ၊ အညွှန်းများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ကျည်ဆံအချက်များ၊ ရဲရင့်သောစကားလုံးများ…အားလုံးသည် visit ည့်သည်၏အာရုံကိုဖမ်းစားသည်။ သင်စာမျက်နှာကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းနှင့် elements ည့်သည်ကိုလိုက်နာရန်ထိုအချက်များကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်ဖော်ခြင်းက၎င်းသည်အားသာချက်ဖြစ်သော်လည်းမှားယွင်းသော element သို့မဟုတ် extraneous element များထည့်ခြင်းက click ည့်သည်အားသင် နှိပ်၍ နှိပ်စေချင်သောခေါ်ဆိုမှုမှဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည် နှင့်ပြောင်းလဲ။
Copyblogger ကဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးသင်၏ site ပေါ်တွင် visit ည့်သည်နှင့်လမ်းညွှန်မှုကိုလိုက်နာသူတစ် ဦး အကြားနှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခုဖန်တီးပေးသည်၊9စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရှုံးစေသော Landing Page Goofs များ။ ဒီနှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်သွားနေတဲ့ခရီးတွေကိုမင်းစဉ်းစားတဲ့အခါအရမ်းသင့်တော်တယ်။
ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာပထမဆုံးလုပ်ရတာကမူလနဲ့ ဦး တည်ရာကိုမြေပုံဆွဲပြီး၊ မင်းဘယ်တော့လဲ သင့်ရဲ့ဆင်းသက်စာမျက်နှာထုတ်မြေပုံသင်သည်အတူတူပါပဲ၊ မျှော်လင့်သည်၊ သင်၏ your ည့်သည်များမည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုစဉ်းစားခြင်း၊ ဦး တည်ရာသည်ဘာလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်စရာမလိုခြင်း။ ဒီမှာပါ9ဘုံအမှားများ ဆင်းသက်လာသောစာမျက်နှာများကိုဖန်တီးသောအခါသင်လုပ်နိုင်သည် (သို့သော်ရှောင်ရှားသင့်သည်)
သင်ရှင်းလင်းစွာမပြခဲ့ပါ တစ်ခုတည်းသော ဦး တည်ရာကိုသို့မဟုတ်ရလဒ်.
သင်မလုပ်ခဲ့ပါ သော့ချက်သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ပါ ထိရောက်စွာ။
မင်းအရမ်းများလွန်းတယ် ဗန်းစကား နှင့်ရှုပ်ထွေးအသုံးအနှုန်းများ။
သင်၏အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ထောက်ခံချက်များဖြင့်သင်မထောက်ပံ့ပါ သင်၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုမြှင့်တင်ပါ.
သင်မလုပ်ခဲ့ပါ extraneous options များဖယ်ရှားပါ အညွှန်းနှင့်အပိုဆောင်းလင့်များလိုပဲ။
မင်းရဲ့ဆင်းသက်မှုစာမျက်နှာကိုသေချာအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူး လျင်မြန်စွာ loaded!
Tags: ရှုပ်ထွေးသောဝေါဟာရပြောင်းလဲခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများကော်ဖီခရီးလမ်းဆုံးဗန်းစကားအဓိကသတင်းအချက်အလက်ဆင်းသက်စာမျက်နှာဒီဇိုင်းစာမျက်နှာ goofs ဆင်းသက်ဆင်းသက်လာစာမျက်နှာ infographicစာမျက်နှာအမှားတွေဆင်းသက်စာမျက်နှာ optimizationပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကြောင်းအကြောင်းအရာများကိုပံ့ပိုးသည်ထောက်ခံစာအလွန်အကျွံအကြောင်းအရာ
စစ်တမ်း - သင်၏အကြောင်းအရာကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုမည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။